Armenia oo sheegtay 2,317 askari looga dilay dagaalka Azerbaijan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Armenia oo sheegtay 2,317 askari looga dilay dagaalka Azerbaijan
Armenia oo sheegtay 2,317 askari looga dilay dagaalka Azerbaijan
Armenia ayaa Sabtidii sheegtay in, in ka badan laba kun oo askari looga dilay dagaalkii socday lixda toddobaad ee ay la gashay Azerbaijan, ee ka dhashay gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh.
“Illaa iminka, waxaan xaqiijinay geeriday 2,317 oo askari, oo ay ku jiraan kuwa aan weli la aqoonsan,” waxaa sidaas qoraal ay soo dhigtay facebook ku tiri Alina Nikoghosyan oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka Armenia.
Dagaalka oo socday ku dhowaad laba bil ayaa soo geba-geboobay toddobaadkan kadib markii labada dal ay gaareen heshiis xabad joojin oo Ruushka uu kasoo shaqeeyey, kaasi oo Armenia oo ay ku dhiibtay dhul badan oo ay qabsadeen Azerbaijan.
Ciidamada Azerbaijan marnaba shaaca kama qaadin khasaaraha kasoo gaaray dagaalka, hase yeeshee tirada guud ee khasaaraha dagaalka ayaa la rumeysan yahay inay aad uga badan tahay inta la shaaciyey.
Madaxweynaha Vladimir Putin ayaa Jimcihii sheegay in tirada dhimashada dagaalka ay ka badan tahay 4,000 oo qof, islamarkaana lagu dhaawacay 8,000 oo kale.
Ugu yaraan 143 qof oo shacab ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaalka.
Previous articleQarax ka dhacay degmada Balli-dhiig ee Somaliland.
Next articleMadaxweynayaasha Puntland iyo Jubbland oo ka biyadiidan Gudiyada doorashada ay magacawday Dowlada Federaalka
Tiro dad ah ayaa ku dhaawacmay qarax shaley ka dhacay goob lagu xusayay dagaalkii koobaad ee adduunka, munaasabaddan oo lagu qabtay magaalada Jiddah ee...
Abiy Axmed “Maanta ayay ku egtahay muddadii loo qabtay inay isa...
Magaca & Sawirka ninkii weeraray kaniisad ku taalla Faransiiska oo la...